Location: Mbido » Ịdee » Airlines » Ụgbọ elu Alaska na-eweta ụgbọ elu Boeing 12-737 ọhụrụ 9
Nhọrọ emere maka nnyefe na 2023 na 2024 na -eme ka atụmanya ego na nkwado nke Alaska Airlines kwalite.
Ụgbọ elu Alaska na -eme ka ụgbọ elu ya na -eto ngwa ngwa.
Alaska ụgbọ elu na-eme nhọrọ n'oge ụgbọ elu 12 Boeing 737-9.
Nhọrọ ụgbọ elu bụ nkwa siri ike maka 2023 na 2024.
Alaska ụgbọ elu kwupụtara taa na ọ na-eme ka ụgbọ elu ya na-eto ngwa ngwa site na ịme nhọrọ n'oge ụgbọ elu 12 Boeing 737-9. Ụgbọ elu nhọrọ ugbu a bụ nkwa siri ike maka 2023 na 2024. Nkwekọrịta a ọzọ na-ebute iwu ụlọ ọrụ Alaska 737-9 na ụgbọ elu 93, ise n'ime ha na-arụ ọrụ ugbu a.
Alaska Airlines kwupụtara nkwekọrịta nhazi na Boeing na Disemba 2020 iji nweta 68 Boeing 737-9 ụgbọ elu n'etiti 2021 ruo 2024, yana nhọrọ maka nnyefe 52 ọzọ n'etiti 2023 na 2026. N'afọ a, ụlọ ọrụ ụgbọ elu emeela nhọrọ 25, gụnyere ụgbọ elu 13 na Mee. Dị ka akụkụ nke azụmahịa a, Alaska ga -agbakwunye nhọrọ 25 iji mejupụta ndị emegoro.
Nat Pieper, onye isi osote onye isi oche nke ụgbọ mmiri, ego na njikọ aka kwuru, "Anyị nwere obi ụtọ ịkwalite uto Alaska, na -ewu na ntọala ego siri ike nke mere ka anyị nwee ike ịnagide ọrịa a." "Ụgbọ elu ndị a bụ ihe amamihe dị na ya, itinye ego ogologo oge na azụmaahịa anyị nke anyị nwere ike ịme ma na-echekwa akwụkwọ nguzozi anyị siri ike."
Ive napụta 2021 2022 2023 2024 Total
Iwu izizi izizi 12 31 13 12 68
Mgbatị nhọrọ May - - 9 4 13
Mmega Ahụ Nhọrọ Ọgọstụ - - 10 2 12
"Boeing ka bụ ezigbo onye mmekọ Alaska. Anyị malitere ife 737-9 nke mbụ anyị n'oge opupu ihe ubi gara aga, anyị na-enwekwa obi ụtọ dị ukwuu na arụmọrụ ụgbọ elu na-arụ ọrụ, ego na gburugburu ebe obibi, "Pieper kwuru. "Ụgbọ elu ahụ na -akarị ihe anyị tụrụ anya ya - site na ịdị jụụ nke injin na -agba ọsọ ruo na oke ha na -enye - ndị ọbịa anyị hụkwara ha n'anya."
A haziri Alaska 737-9s ka ọ buru ndị ọbịa 178 nwere oche klaasị 16 na oche klaasị 24, nke na-enye ọnụ ụlọ kacha elu nke ụgbọ elu US ọ bụla.
Alaska Alaska Airlines Boeing
Israel na -arịọ maka enyemaka ka nnukwu ọkụ ọgbụgba na -enwu na mpụga Jerusalem
Marriott International ahọpụtala onye osote mpaghara ọhụrụ…
Bermuda wepụrụ asambodo iru eru ikuku maka mmadụ 800…
Ụgbọ elu C919 ọhụrụ nke China ga-ebuga…
Ntụrụndụ & ile ọbịa dị n'azụ dị ka ndị ọzọ ...
Canada na-agba mbọ ibelata oge echere ọdụ ụgbọ elu
Ndị ụgbọ elu China Eastern kwụsịrị ụgbọ elu Boeing 737
Njikwa esemokwu mba ụwa n'oge a